Sei Tichipinda Magungano?
SARUDZA MUTAURO Abbey Afrikaans Ahanta Aja Akha Albanian Altai Alur Amharic Arabic Arabic (Morocco) Armenian Armenian (West) Assamese Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bembe Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiChangana (Zimbabwe) ChiGhomálá’ ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiItawit ChiKaren (S'gaw) ChiNgiemboon ChiPhimbi ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili ChiYemba Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Comorian (Ngazidja) Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) Esan Estonian Ewe Fang Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Huastec (San Luis Potosi) Huave (San Mateo del Mar) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Lega Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mbunda Medumba Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuBulgaria Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNepal Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuVietnam Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Mutauro Wemasani wokuLatvia Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Piaroa Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russian Rutoro Rwandan Sign Language Réunion Creole Saint Lucian Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Thai Thai (Northeastern) Tigrinya Tiv Tlapanec To'abaita Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wixárika Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yombe Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Sei vanhu ava vari kufara kudai? Vari pagungano redu. Sezvaiitwa nevanhu vaMwari vekare, avo vakaudzwa kuti vaungane katatu pagore, isuwo tinogara tichitarisira kusvika kwenguva yatinoungana takawanda. (Dheuteronomi 16:16) Gore negore tinoita magungano matatu: magungano edunhu ezuva rimwe chete maviri, uye gungano remunharaunda remazuva matatu. Magungano aya anotibatsira sei?
Anosimbisa kubatana kwedu sevaKristu. VaIsraeri vaifara chaizvo pavairumbidza Jehovha vari “pakati peungano yakakura,” uye ndizvo zvatinoitawo patinoungana pamagungano edu. (Pisarema 26:12; 111:1) Magungano aya anotipa mukana wekuonana uye kushamwaridzana neZvapupu zvekune dzimwe ungano kana zvekune dzimwe nyika. Masikati tinodya pamwe chete tiri panoitirwa gungano, izvo zvinotipa mumwe mukana wekuti tishamwaridzane. (Mabasa 2:42) Pamagungano aya tinozvionera tega rudo runobatanidza ‘sangano redu rese rehama’ dziri panyika.—1 Petro 2:17.
Anotibatsira kuti tikure pakunamata. VaIsraeri vaibatsirwawo ‘pavainzwisisa mashoko’ emuMagwaro avaitsanangurirwa. (Nehemiya 8:8, 12) Isuwo tinokoshesa chaizvo zvatinodzidziswa pamagungano edu zvinobva muBhaibheri. Purogiramu imwe neimwe inenge iine dingindira rinobva muShoko raMwari. Zvinhu zvinofadza zvakadai sehurukuro, kuedzesera zvinhu zvakatoitika, uye hurukuro dzekusiyirana, zvinotidzidzisa kuti tingaita sei kuda kwaMwari muupenyu hwedu. Tinosimbiswa patinonzwa zvakaitika kune vamwe vari kukunda miedzo yavanosangana nayo sevaKristu munguva dzino dzakaoma. Pamagungano emunharaunda panoitwa mitambo inotibatsira kuona kuti nyaya dzemuBhaibheri dzinotova zvinhu chaizvo zvakaitika, uye inotipa zvidzidzo zvinotibatsira. Pagungano rimwe nerimwe panobhabhatidzwawo vanhu vanoda kuratidza pachena kuti vakazvitsaurira kuna Mwari.
Sei magungano achiita kuti tifare?
Kupinda gungano kuchakubatsira sei?
Kana uchida kuona kubatana kwatakaita tinokukurudzira kuti upinde gungano redu rinotevera. Anokudzidzisa Bhaibheri anogona kukuratidza purogiramu yacho kuti uone kuti inyaya dzipi dzichakurukurwa. Maka musi uchaitwa gungano racho pakarenda, wonyora kwarichaitirwa, wozoripinda kana uchikwanisa.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Sei Tichipinda Magungano?
jl chidzidzo 11
Zvii Zvinodiwa naMwari?
CHIDZIDZO 1 Zvapupu zvaJehovha Vanhu Vakaita Sei?
CHIDZIDZO 2 Sei Tichinzi Zvapupu zvaJehovha?
CHIDZIDZO 3 Chokwadi Chiri muBhaibheri Chakawanikwazve Sei?
CHIDZIDZO 4 Takabudisirei Bhaibheri reShanduro yeNyika Itsva?
CHIDZIDZO 5 Uchawanei Kana Ukauya Pamisangano Yedu yechiKristu?
CHIDZIDZO 6 Kuwadzana Nevatinonamata Navo Kunotibatsira Sei?
CHIDZIDZO 7 Misangano Yedu Yakaita Sei?
CHIDZIDZO 8 Sei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?
CHIDZIDZO 9 Tinganyatsogadzirira Sei Misangano Yedu?
CHIDZIDZO 10 Chii Chinonzi Kunamata Kwemhuri?
CHIDZIDZO 11 Sei Tichipinda Magungano?
CHIDZIDZO 12 Basa Redu Rekuparidza Umambo Rinoitwa Sei?
CHIDZIDZO 13 Chii Chinonzi Piyona?
CHIDZIDZO 14 Zvikoro Zvipi Zvinopindwa Nemapiyona?
CHIDZIDZO 15 Vakuru Vanobatsira Sei Ungano?
CHIDZIDZO 16 Vashumiri Veungano Vanobatsira Sei?
CHIDZIDZO 17 Vatariri Vematunhu Vanotibatsira Sei?
CHIDZIDZO 18 Tinobatsira Sei Hama Dzedu Padzinowirwa Nenjodzi?
CHIDZIDZO 19 Muranda Akatendeka Akangwara Ndiani?
CHIDZIDZO 20 Dare Rinotungamirira Rinoshanda Sei?
CHIDZIDZO 21 Chii Chinonzi Bheteri?
CHIDZIDZO 22 Pahofisi Yebazi Panoitwei?
CHIDZIDZO 23 Mabhuku Edu Anonyorwa Sei Uye Anoturikirwa Sei?
CHIDZIDZO 24 Mari Inoshandiswa Pabasa Redu Remunyika Yese Inobva Kupi?
CHIDZIDZO 25 Dzimba dzeUmambo Dzinovakirwei Uye Dzinovakwa Sei?
CHIDZIDZO 26 Tingabatsira Sei Kuti Imba Yedu yeUmambo Irambe Yakanaka?
CHIDZIDZO 27 Tingabatsirwa Sei neRaibhurari yepaImba yeUmambo?
CHIDZIDZO 28 Zvii Zviri paWebsite Yedu?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?